Ciidamada Badda ee Iiraan oo badbaadiyay Markab – SBC
Ciidamada Badda ee Iiraan oo badbaadiyay Markab
Saraakiisa sare ee Ciidamada Badda ee Iiraan aya sheegay inay ka hortageen weerar ay koox hubeysan oo burcad badeed ah ay ku qaadeen markab nooca saliida qaada ah oo marayay Xeebaha Gacanka Cadmeed.
Ku xigeenka Saraalka ugu sareeya Ciidamada badda ee Iiraan Admiral Seyyed Mahmoud Mousavi ayaa sheegay in maraakiibtooda dagaalka ay si degdeg ah u caawiyeen Markabkaas oo ay burcad badeeda Soomaalida qarka u saarnaayeen inay afduubtaan.
Saraakiisha Dowlada iiraan Ma sheegin Magaca iyo halka laga lahaa markabka ay badbaadiyeen waxaa ay xuseen in ay u talaabiyeen Markabkaas biyaha Amaanka ah iyaga oo dhaafiyay Goobaha Amaankooda uu qatarta yahay.
Mr Seyyed Mahmoud ayaa waxaa uu sheegay in Kooxdii hubeyseyd ee weerarka soo qaaday ay goobta isaga baxsadee iyaga oo wata doonyaha dheereeya ee ay ku geystaan weerarada qafaalashada ah.
Ciidamada badda ee Iiraan ayaa howlgalka la dagaalanka Burcad badeeda Soomaalida waxay ka wadeen xeebaha dalka soomaaliya tan iyo sannadkii 2008-dii isaga oo badbaadiyay gadiid badeed badan oo burcad badeed Soomaali ah ay weerareen.
Gacanka Cadmeed oo ah marinka ugu muhiimsan Gadiidka bada ee caalamka ayaa waxaa khatar baahsan ku haya Burcad badeeda Soomaalida waxaana gacankan isticmaala Sannadkii in kabadan 20,000 oo markab oo u socda Dalalka Qaraadaha Caalamka Asia, Europe iyo Mareykanka .